PSJTV | डाक्टर पनि सडकमा उत्रिएपछि बिरामीको बिजोग !
Monday 22 July 2019 | सोमबार, ०६ साउन २०७६
डाक्टर पनि सडकमा उत्रिएपछि बिरामीको बिजोग !
सोमबार, १८ भदौ २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौँ, १८ भदौ ।
अठार दिनको छोराले बान्ता गरेपछि सिन्धुलीकी संगीता रावत दौडँदै कान्ति बाल अस्पतालमा पुगिन्। चिकित्सकले पेटको एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुपर्ने बताएपछि छोरा च्यापेर उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल गइन्। आकस्मिकबाहेक सेवाहरू ठप्प भएको थाहा पाएलगत्तै रुन थालिन्। संगीतालाई छोराको ज्यान बचाउने चिन्ता थियो। सिमसिमे पानीमा भिजेकी २१ बर्से रावतले सुँक्सुँकाउँदै भनिन्, ‘छोराको ज्यानको तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।’
संगीताझैं चिन्तित देखिन्थे, धादिङका दीपक गुरुङ। शिक्षण अस्पतालले छोरी दीपिकालाई मुटुको जाँच गराउन गंगालाल हृदयरोग केन्द्र पठाएपछि उनी तनावमा परे। गंगालाल अस्पतालको टिकट काउन्टर बन्द थियो। आपतकालीन कक्षमा पुगेका उनलाई चिकित्सकहरूले इको गर्न सेवा बन्द भएको जनाउँदै फर्काए। सुस्त देखिएकी छोरीको मुटुको परीक्षण गर्न जाँदा आपतकालीन कक्षका चिकित्सकले जवाफ फर्काए, ‘आज हड्ताल छ, केही गर्न सकिँदैन। अहिले नै मुटु परीक्षण नगर्दा केही बिगँ्रदैन। कुरा बुझ्नु भा छ नि।’
चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण थुप्रै बिरामीहरूले आइतबार सास्ती खेपे। दूरदराजबाट उपचार गर्न राजधानी आएका कति बिरामी अलपत्र परे भने कति होटलमा बसेर उपचार गर्दा बेखर्ची भएको गुनासो गरे। सरकारी मात्र होइन निजी अस्पतालले पनि अति गम्भीर अवस्थाका बिरामीबाहेक अन्यको भर्ना लिएनन्। मुलुकभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द भए।
बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा वन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरिन्। तर, उनको अनुरोधलाई चिकित्सकले टेरेनन्। वन्तले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो पेशामा सहभागी भइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। तर चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका अन्नपुर्णमा खबर छ ।
अस्पतालको शय्यामा पनि ब्रह्मलुट
काठमाडौँमा महामारी फैलिने त्रास
यस्ता पुरुषलाई बढी हुन्छ हर्ट अट्याकको खतरा
गर्भावस्थामा किन दुख्छ पेट ?
स्वास्थ्यका कर्मचारीको व्यापक हेरफेर, को कहाँ कहाँ पुगे ?
सुटुक्कै मार्नसक्छ अण्डाशयको क्यान्सरले, यी हुन् लक्षण
पूर्णतातिर नेकपाको एकता, प्रचण्डको भूमिका के ?
बालुवाटारमा पूर्वएमालेका पाँच भाइ
ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री - नेता पौडेल
कांग्रेसमा सल्बलाउँदै कोइराला परिवार
नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँट : संगठनमा वामदेव, विदेश विभागमा नेपाल
मनसुन फेरी सक्रिय : कहाँ कहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ?
नेकपामा को को भए जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज ? (नामावलीसहित)
गुठी जग्गाको सम्पूर्ण विवरण माग
प्रि–सिजनको पहिलो खेलमा रोनाल्डोको युभेन्टस पराजित
आसैआसमा बितेका रमिताको १९ वर्ष
सरकारले अख्तियारको अधिकार कटौती गर्दै
वडाध्यक्षको काममा सांसदको मरिहत्ते
1st Jul 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडाैंः गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ मध्ये करिब ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको छ । उपत्यका भित्रिनेरबाहिरिने बस पार्किङका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा होटल, वर्कसप, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक केन्द्र ...
5th Jun 2019 पिएसजे न्युज
रोल्पा: आठ वर्षीय जीवन विक घरको सुरमा उभिएर ‘मलखाद’ माथि बसेकी अचेत आमाको पीडा हेर्ने गर्छन। आमाको जलेको खुट्टा अनि अशक्त अवस्था देख्दा उनी भक्कानिन्छन्। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा घरपरिवार त्यागेर पूर्वलडाकु ...
24th Jun 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'मैले आजति भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ । तर त्यसको ...